Waxa la cuno kahor jimicsiga | Ragga Stylish
Dad badan ayaa aamminsan inaysan muhiim ahayn in wax la cuno ka hor jimicsiga oo laga yaabo inaad qaldan tahay. Cunista kahor jimicsiga waxay lamid tahay cunista tabarucan yar dheeraad ah oo kaa caawinaya inaad awood u yeelatid inaad jimicsigaaga aad uga sii fiicnaatid.
Ujeeddadu waxay noqon doontaa in la ilaaliyo saldhigga borotiinnada, karbohaydraytyada iyo xoogaa dufan ah oo ku jira jirkaaga kahor jimicsiga jimicsi xoog leh. Uguyaraan waad liqday inta udhaxeysa nus iyo saac kahor intaadan bilaabin sameynta. Sidan oo kale, jidhkaagu wuxuu yeelan doonaa il nafaqooyin uu u baahan doono. shidaal ahaan taasna waxay muujin doontaa inta lagu jiro tababbarka , maxaa yeelay waxaad noqon doontaa mid aad u firfircoon.
1 Jimicsi soon
2 Si fiican wax u cun oo heer kale ayaad ku jirtaa
3 Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ka hor tababarka
Waxaa jira dad badan oo raaca caado aan waxba cunin marka hore subixii iyo isboorti. Aragtidiisu waxay ku saleysan tahay, maadaama aysan ku jirin wax saldhig ah oo lagu toogto inta lagu gudajiro jimicsiga, dheef-shiid kiimikaadka ayaa adeegsan doona keydka dufanka ee jirkaagu ku jiro.
In badan oo xaqiiqda ka fog, haddii caksiga uu run yahay, takhasusleyaashu kuma talinayaan in la sameeyo dhaqanka noocan ah haba yaraatee. Iyaga waa muhiim haa ama haa had iyo jeer cun nooc ka mid ah cuntada si jidhku u helo dhammaan tamarta uu u baahan yahay.
Mana aha in lala tago calool buuxa maxaa yeelay haddii kale socodka dhiiggaagu wuxuu noqon doonaa mid si gaar ah oo gaar ah diiradda u saara dheef-shiidkaaga. Sidoo kale haddii ay tahay tababar xoog leh waxaa laga yaabaa inaad yeelato xanuun caloosha ah, wareer ama dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa ee lugahaaga.
Haddii jirkaagu uusan u dulqaadan karin wax adag wax ugu horreeya subaxnimada, ugu yaraan isku day inaad isticmaasho wax dareere ah oo xoogaa xoogaa ah ku siinaya.
Si fiican wax u cun oo heer kale ayaad ku jirtaa
Haddii aad haysato wakhti yar oo aad wax ku cunto wax yar uun ka hor jimicsigaaga, waxaa lagugula talinayaa inay ahaato kaliya 30 daqiiqo kahor jimicsiga.
Waa inaad cuntaa cunnooyinka glycemic index maaddaama ay bixiyaan sonkor yar si ay ugu dhex wareegto dhiigga iyo tamar badan. Sidan ayaa fuuq-bixiyeyaashan loo siidaynayaa si tartiib tartiib ah waxayna siinaysaa awood u lahaanshaha ku filan inta lagu jiro dhammaan jimicsiga.
Haddii glycemic index-ka uu sareeyo, kaarboohaydraytyada fudud, iyoKuwani waxay jidhka siin doonaan tamar deg deg ah hal mar, Sameynta jirka waxay yeelan kartaa hoos u dhac degdeg ah oo gulukoos ah (hoos u dhaca sonkorta dhiiga). Calaamadahaas waxaa ka mid ah dawakhaad, matagid iyo xoog hoos u dhac degdeg ah, oo keenaya guud ahaan culeys iyo in aan la oggolaan in jimicsiga si habboon loo sameeyo.
Tan awgeed waa muhiim in, haddii aysan ahayn kaliya mid ka mid ah karbohaydraytyada, ugu yaraan isku dar labada. Tusaale wuxuu noqon karaa baaquli boorash ah oo miro leh, ama isku dar ah lowska iyo nooc ka mid ah saliidda caafimaadka qabta sida qumbaha. Caanaha iyo waxyaabaha laga helo, hilibka iyo ukunta sidoo kale waxay ku dhex dhacaan cuntada noocan ah.
Barootiintu sidoo kale waa muhiim. Nafaqadani waxay ka caawisaa inay si wanaagsan u milmaan kaarboohaydraytyada iyo inay si fiican u shiiddo dufanka. Haddii xaddiga borotiinku ka badan yahay kaarbohaydraytka, jidhkaagu wuxuu soo saari doonaa tamar-darro taasna waxay u dhigantaa inaad raadiso dufanka jidhkaaga si aad u hesho. Taasi waxay u dhigantaa luminta dufanka jirka.
Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ka hor tababarka
Avena: waa dalag hodan ku ah carbohydrates index glycemic hooseeya, borotiin iyo fiber. Cuntadani waxay leedahay tusmooyin sare oo b-glucan ah oo ka caawiya hoos u dhigidda heerarka kolestaroolka, iyo haddii aysan intaas ka badnayn, wuxuu dejiyaa heerarka sonkorta dhiigga.
Banana: midhahan waxaa door bidaya ciyaartooyda. Waxay hodan ku tahay karbohaydraytyada, fiitamiin B6, magnesium, potassium, iyo fiber. Thanks to potassium, waxaad kaa caawineysaa isku dheelitirka dareeraha ee jirkaaga, dabci muruqyadaada taasina waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato casiraad caajis ah.
Bariis: ilo kale oo weyn karbohidraatka oo aan lahayn dufan. Way fiicantahay in lagu daro nooc ka mid ah borotiinka sida digaaga iyo hilibka turkey.
Baastada: qayb weyn ee karbohaydraytyada si dhakhso leh u nuugaya. Waxay ku habboon tahay in la qaato kaligaa ama maraqa yaanyo ama saliid saytuun ah oo daroogo ah.
Miraha: Waxay leeyihiin tabarucaad weyn oo tamar ah (illaa 600 kcal 100kii garaam) aad ayey ufiicanyihiin tan iyo markii waxaad siisaa faybar, borotiin, dufan caafimaad leh iyo karbohaydraytyo Taasi waa sababta ay faa'iido u leeyihiin, laakiin waa inaad ka taxaddartaa inta ku jirta kaloriinta.
Qaxwada: Waxay noqon kartaa dhammaystir wanaagsan si kor loogu qaado dadaalka inta lagu jiro tababarka. Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato qiyaastii 3 mg oo kafee ah kiilo kasta oo culeyska jirka ah, kafeyn badan waxay u dhigantaa xanuunka neerfaha, degganaansho la’aan, madax xanuun ... taas oo ah, tababar aan waxtar lahayn. Si aan fikrad kaa siino, koob bun ah waxaa ku jira qiyaastii 40 mg oo kafee ah.
Ukumaha: cuntadani waxay u fiican tahay caafimaadka wadnaha. Waxay leeyihiin a qaadashada borotiinka weyn waana ku habboon yihiin quraac.
Caanood: cuntadani waxay hodan ku tahay protein iyo kaalshiyam. Sidoo kale waa xulaf weyn in la ilaaliyo dhirtaada mindhicirka iyo isku darka cuntooyinka sida miro ama miro qaar ayaa ka caawin doonta iyaga inay noqdaan kuwa ugu fiican ee lagu daro si loo helo tamarta saxda ah ee aad u baahan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Waxa la cuno kahor jimicsiga